Aretina hafa no nahafaty ireo zaza roa notsaboina tao Befelatanana herinandro maromaro lasa izay fa tsy kitrotro akory. Raha sanatria ka nisy izany dia tsy azo nafenina fa tsy maintsy ampahafantarina ny mponina toy ny fisian’ny aretina pesta ho fiarovana ny rehetra. Nanamafy izy ireo omaly fa mirongatra ny aretina kitrotro. Tsy ireo ankizy latsaky ny dimy taona ihany anefa no lasibatra fa misy voa ihany koa ny olon-dehibe ka tokony hitandrina ny rehetra. Ny fanaovam-baksiny iadiana amin’ny aretina kitrotro ihany anefa no vahaolana hahafahana miady amin’izany. Ho an’ireo zaza sivy ka hatramin’ny 59 volana dia misokatra malalaka ho azy ireny ny tobim-pitsaboana fototra hanaovana ny vaksiny. Toraka izany koa ireo marary mila fitsaboana. Raha sanatria ka efa misy soritr’aretina anefa ny zaza iray dia tsy azo hatao vaksiny aloha raha tsy sitrana soa aman-tsara. Tsiahivina fa mora sitranina ny aretina kitrotro raha vita vaksiny ny zaza na olon-dehibe iray voany. Mahajamba kosa izy raha tsy voatsabo noho ny fiakarany any anaty maso, indrindra fa ho an’ireo tsy vita vaksiny.